Ithimba lokuhlela | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-Hardware Libre yiphrojekthi enikezelwe ekusabalaliseni mayelana nobuchwepheshe obusha be-Open Hardware. Eziningi ezaziwa ngokuthi i-Arduino, Raspberry kepha ezinye hhayi njenge-FPGAs. Singabanethiwekhi ye-blog ye- Ibhulogi yezindaba esebenza kusukela ngo-2006.
Ngo-2018 sibe ngozakwethu be- Mahhala nge omunye wezehlakalo ezibaluleke kakhulu zaseSpain ezihlobene nokunyakaza kwamahhala nokuvulekile, kokubili ku-Hardware naku-Software
Ithimba lokuhlela le-Hardware Libre lakhiwa iqembu labenzi, ongoti ku-Hardware, electronics kanye nobuchwepheshe. Uma nawe ufuna ukuba yingxenye yeqembu, unga sithumele leli fomu ukuze sibe ngumhleli.
Uchwepheshe we-IT unentshisekelo enkulu emhlabeni wamarobhothi ne-Hardware ngokuvamile kusukela ngisemncane, into eholele ekutheni ngingahlaliseki ngobuchwepheshe bamuva noma ukuzama zonke izinhlobo zamabhodi nezinhlaka eziwela ezandleni zami.
Ngingumthandi wamakhompiyutha futhi ikakhulukazi iHardware Hardware. Okwakamuva kukho konke mayelana nalo mhlaba omuhle, engithanda ukuhlanganyela kuwo konke engikutholayo nengikufundayo. I-Hardware yamahhala ngumhlaba othokozisayo, anginakungabaza ngalokho.
UGeek umlutha wobuchwepheshe, imidlalo yama-warg nokunyakaza komenzi. Ukuhlanganisa nokuqaqa zonke izinhlobo zehadiwe kuyisifiso sami, engikusebenzisa isikhathi esiningi empilweni yami yansuku zonke, nalokho engifunda kakhulu kukho.
Umthandi wanoma yiluphi uhlobo lobuchwepheshe nomsebenzisi wazo zonke izinhlobo zezinhlelo zokusebenza, kanye nomuntu othanda ukucubungula noma yiluphi uhlobo lwedivayisi kagesi ewela ezandleni zami.